daadah.com - dibiro
Posts Tagged ‘dibiro’
Xubin ahaan naaska mitajiidadu(Appendix) wuxuu ku yaalaa halka ay ku kulmaan mindhicirka wayn iyo mindhicirka yar. Waa tuubo yar oo khafiif ah oo dhererkeedu yahay 4 inch oo ka laalaada halka uu ku dhamaado mindhicirka wayn. Caadiyan mitajiidadu waxay fadhidaa qaybta midig hoose ee uur-ku-jirta. Shaqada ay qabato mitajiidadu ilaa hadda lama yaqaan. Qaar saynisyahanadu
Cuddurka diisantariyo waxaa lagu qeexaa shuban ama saxaro jilicsan oo ay la socdaan axal, dhiig, malax iyo callool-maroojis. Dadka Soomaaliyeed cuddurkaan waxay u yaqaanaan magacyo badan oo ay ka mid yihiin Axal-dhiig, shuban-dhiig, xundhur iyo kuwa kale. Diisantariyada waa cuddur ku dhaca mindhicirada oo ay keenaan jeermiyada baakteeriyada iyo baarasaytyada Ameebaha. Cuddurkaan wuxuu ka dilaacaa
Jamaal wuxuu dareemayaa inuu musqusha tago si uu u soo saxaroodo, waayo muddo 4 beri ah ma saxaroon. Wuxuu galay musqushooda, Laakiin saxankii musqusha markii uu ku fariistay ayuu sameeyay docosho badan iyo inuu saxarada xoog isaga soo saaro. Cabaar markuu xarbiyay ayuu soo tuuray dhawr qurub oo adag oo qalalan. Jamaal dabadeed saxaradii ayuu